भिटामिन सी कति प्रभावकारी ?
२०७६ चैत १९ बुधबार ०९:५८:००
डा. प्रभाकर साह, जनरल सर्जन कान्तिपुर अस्पताल
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको औषधि पत्ता लगाउन संसारभरिका चिकित्सक र वैज्ञानिक लागिपरेका छन् । अहिलेसम्म विभिन्न एन्टिमेलेरियल, एन्टिभाइरल्स र युुनानी औषधिमाथि परीक्षण गरिए पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि औषधि पत्ता लागेको छैन । कोरोना नियन्त्रणका लागि उपचारका विभिन्न सिद्धान्त दिनानुदिन निकालिए पनि अहिलेसम्म विज्ञानले प्रमाणित गरेको छैन ।
तर, भिटामिन सीको प्रयोग संक्रमण, रक्तचाप र ब्रोङकाइटिसका लागि फाइदाजनक हुने भएकाले संक्रमितलाई प्रभावकारी हुने अनुमान गरिएको छ । भिटामिन सी प्रतिरोधी क्षमता बढाउनका लागि प्रभावकारी मानिन्छ, तर अहिलेसम्म भिटामिन सी कोभिड–१९ का संक्रमितका लागि कति उपयोगी हुने भन्ने प्रमाणित भइसकेको छैन ।
भिटामिन सी र प्रतिरोधी क्षमता
भिटामिन सी मानव शरीरका लागि मुख्य एन्टी अक्सिडेन्ट हो । जसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन सहयोग गर्छ । सामान्यतया भिटामिन सीले रोगसँग लड्ने सेता रक्तकोष (डब्लुबिसी)को निर्माणमा सघाउ पु-याउँछ । योसँगै श्वासप्रश्वासको संक्रमण र अन्य भाइरसविरुद्ध एन्टिभाइरलका रूपमा काम गर्छ ।
दैनिक खानपानमा भिटामिन सीको प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा निमोनियाको सम्भावना ८० प्रतिशतले कम र अन्य भाइरल इन्फेक्सन करिब ५० प्रतिशत कम हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
एक अध्ययनअनुसार भिटामिन सीले शरीरमा भाइरसको वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्छ । निमोनिया, ब्रोङकाइटिस, फोक्सोसँग सम्बन्धित र अन्य भाइरल संक्रमण घटाउन मद्दत गर्छ । तसर्थ भाइरस इन्फेक्सनबाट बच्न सामान्यतया वयस्क महिलाका लागि ७५ मिलिग्राम र पुरुषमा ९० मिलिग्राम भिटामिन सीको आवश्यकता हुन्छ ।
भिटामिन सी सप्लिमेन्टका रूपमा भन्दा पनि दैनिक खानपानमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, कागती, हरियो खुर्सानी, हरिया मौसमी फलफूल, सागपातजस्ता खानेकुरामा भिटामिन सी पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि कति प्रभावकारी ?
कोरोनाको संक्रमणले फोक्सोमा एक किसिमको तरल पदार्थ जम्मा हुन्छ, जसले एल्भोलर कोषिकाहरू नष्ट गरिदिने भएकाले श्वासप्रश्वासमा समस्या ल्याउँछ । भिटामिन सीले फोक्सोमा तरल पदार्थ जम्न नदिने भएकाले फोक्सोमा हुन सक्ने क्षति कम गर्छ । योसँगैै अन्य फ्लु नियन्त्रणका लागि पनि भिटामिन सी प्रभावकारी मानिन्छ ।
भिटामिन सीले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने भए पनि कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुरा गलत हो । किनकि अहिलेसम्म भिटामिन सीको प्रयोगले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएको वैज्ञानिक प्रमाण छैन । शरीरमा भाइरसको संक्रमण हुन नदिन र प्रतिरोधी क्षमता बढाउन एन्टिअक्सिडेन्टयुक्त खाना खानेसँगै सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
#काेराेना # भिटामिन सी
कोरोना मिटर : १५ सय ७५ निको हुँदा १२ सय ७२ संक्रमित थपिए
दुई महिनाअघि नै देशको १३ प्रतिशत जनसंख्या संक्रमित भएको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने भन्दै गोप्य राखियो
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए पाँच सय ६१ संक्रमित
कोरोना मिटर : २४ घन्टामा २१ सय ११ निको भए, १३ सय ४३ संक्रमित थपिए
अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको माग